Maamulka Isbitaal Madiina oo ka hadlay dhaawacyada la geeyay Isbitaalka – STAR FM SOMALIA
Maamulka Isbitaal Madiina oo ka hadlay dhaawacyada la geeyay Isbitaalka
Xaalada Magaalada Muqdisho ayaa saaka degan, kadib markii dadka reer Muqdisho shalay galab ay la argagaxeen qaraxii cuslaa ee lagu qaaday Hoteelka Jazeera ee Magaalada Muqdisho oo Masaafo gaaban u jira Madaarka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Hoteelka Jazeera oo lagu weeraray gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, ayaa waxaa hada ku sugan oo amniga adkeynaya ciidamada loo yaqaan gaashaan oo ka tirsan Nabad Suggida Somalia, iyadoo gabi ahaanba la xiray wadada aada Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo muhiim u ah socdaalka dhanka dibada dadka u baxaya iyo shaqooyinka Garoonka.
Dhanka kale Dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay ee Isbitaalka Madiina la dhigay ayaa tiradooda waxa ay gaaraysa 25-ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba, sida uu VOA u sheegay Agaasimaha Isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf.
21 qof ayaa Isbitaalka la jiifiyay kuwaasi oo dhaqaatiirta ay u arkeen in xaaladooda caafimaad ay tahay mid aad u liidato, maadaama qaar ay si xun ugu dhaawacmeen dhismaha Hoteelka oo bur buray iyo firirka qaraxii oo dadka si xun ugu dhaawacmeen.
Agaasimaha Isbitaalka Madiina ayaa sheegay in afar ruux oo dhaawacooda fududaa guryahooda dib loogu celiyay, halka 21-ka kalena la seexiyay oo dhaqaatiirta ay ku dadaalayaan sidii loo daaweyn lahaa.
Jugta culus ee qaraxii shalay dadka waxa ay soo xusuusisay weerarkii dhibaatada badnaa ee lagu qaaday Xaruntii Hargaha iyo Saamaha ee KM4 ku taallo, halkaasi oo dad badan oo Arday ahaa lagu laayay.
Dadka Muqdisho ku nool ayaa quus ka taagan dhibaatadan soo noq noqotay ee xalka loo la’yahay, waxa ayna dadka yihiin dhibanayaal ku dul nool mowjado qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo Magaaladan ay martigelisay.
Ajaanib dhimasho iyo dhawac kasoogaaray werarkii hotel jaeera
Daawo Sawirada: weerarkii lagu qaaday Hotelka Jazeera